Ny angovo azo havaozina dia mamorona asa efa ho 400000 any Allemà | Fanavaozana maintso
Tomas Bigorda | | Biomassa, Angovo Solar Photovoltaic, Angovo azo havaozina
Amin'ny maha tranokala azo havaozina antsika dia efa hitantsika tamin'ny fotoana maro ny mety ho famoronana asa tsara atolotry ny angovo azo havaozina. Ohatra, ny indostria dia mampiasa olona betsaka kokoa any Etazonia fa tsy entona, solika ary arintany.
Soa ihany, androany dia misy angon-drakitra akaiky kokoa sy azo tsapain-tanana momba ny tsena amin'ny fitomboana mitombo, amin'ny ankamaroan'ny firenena mandroso. Manao ahoana ny raharaha Alemania.
Amin'izao fotoana izao, angovo azo havaozina dia miteraka saika Asa 400000 XNUMX eo amin'ny tsenan'i Teutonic. Zavatra iray mampiseho ny maha-zava-dehibe ny sehatra, mihoatra ny fihenan'ny famoahana entona entona. Mampalahelo fa mitombo hatrany io isa io. Ny fanidiana ny toby nokleary dia misy ifandraisany betsaka amin'izany, amin'izao fotoana izao dia tsy mandrakotra ny angovo azo havaozina ny fanjifana rehetra, ary ny tsy fahampiana dia vokarin'ny zavamaniry arintany na gazy. Na dia antenaina amin'ny taona ho avy aza ny fanidiana ireo, izay hanatsara be ny famoahana ny fifangaroan'ny Alemanina.
Raha ny filazan'ny Fikambanan'ny rano sy angovo alemanina, loharano toy ny rivotra sy ny masoandro, ao amin'ny firenena dia efa mihoatra ny habetsahan'ny tratran'ireo mpitatitra angovo nentim-paharazana izy ireo.
Nanomboka tamin'ny 'Energiewende', na drafitra fanovana angovo nankatoavina efa-taona lasa izay, natomboka tamin'ny fanoloana ny angovo nokleary sy fosil toy ny gazy voajanahary, arina sy solika. Fandaharana iray izay mikasa ihany koa hiaro ny tontolo iainana, hahatratra ny vidiny mirary ho an'ny mponina Alemanina sy ny fiarovana ny angovo eto amin'ny firenena.
Araka ny voalazan'ny Association, tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatratra famokarana iray tao amin'ireo foibem-pamokarana herinaratra solosaina photovoltaic an'ny 22GW herinaratra isan'ora.
2016 no taona tsara indrindra ho an'ny angovo azo havaozina any Alemana
Tamin'ny 2016, Alemana dia nampiasa angovo azo havaozina bebe kokoa noho ny hatramin'izay, mamokatra 32% ny herinaratra ilainy amin'ny alàlan'ny angovo azo havaozina.
Raha atotaly dia namokatra mihoatra ny 191 TWh herinaratra avy amin'ny angovo azo havaozina. Marika izay mamela mihoatra ny iray tratra nandritra ny taona lasa, izay 187 TWh, manome 31,5% ny totalin'ny herinaratra lanin'ny firenena.
Ny tanjon'ny governemanta federaly dia ny hahatratra anjara azo havaozina 35% amin'ny taona 2020. Tanjona iray izay tsy hahasarotra ny fanarahana io fironana io.
Ny famokarana azo havaozina dia rava toy izao:
Rivotra avy any ivelany: 13 TWh, 57% mihoatra ny tamin'ny 2015, ary inona no hitombo amin'ny ho avy.
Firenena eropeana telo, Alemana, Danemarka ary Netherlands, amin'ny alàlan'ny TSO (TenneT Holland, Energetika.dk ary TenneT Alemana) dia hamorona tetikasa fampidirana vaovao lehibe indrindra azo havaozina amin'ny tantara.
Antsoin'izy ireo izany ny lohasaha Silicon an'ny rivotra any ivelany. Ho an'ity, ireo mpikirakira ny rafitra herinaratra telo ireo dia hamorona nosy artifisialy eo afovoan'ny Ranomasina Avaratra (Dogger Bank) izay hampiasana ny fampidirana ny rivotra hatrany ivelany 100 GW, izay hampifandraisina amin'ny alàlan'ny sehatra iray.
Rivotra an-dranomasina: 67 TWh, 6% latsaky ny tamin'ny 2015.
Solar photovoltaic: 38 TWh, 1% latsaky ny tamin'ny 2015.
herinaratra (ao anatin'izany ny paompy): 22 TWh, 13% mihoatra ny tamin'ny 2015.
Biomassa sy fako: 52 TWh, 3% mihoatra ny tamin'ny 2015.
hafanana avy ao anaty: 0,2 TWh, 12% mihoatra ny tamin'ny 2015.
Raha ny filazan'ny filohan'ny Fikambanan'ny Alemanina misahana ny angovo sy ny rano, Stefan Kapferer, dia nilaza fa na dia mitombo hatrany aza ny ampahan'ny taranaka azo havaozina, ny firenena mbola mila loharano mahazatra hanohanana io fanovana ny maodely angovo io. Naneho hevitra ihany koa izy fa ilaina ny manitatra ny tambajotra elektrika, zavatra izay eritreretin'ny Ministeran'ny Toekarena Alemanina ihany koa, izay manome toky fa "ny fanitarana ny tambajotra mazava ho taraiky mikasika ireo tanjona napetraka sy ilaina ».
Na eo aza ny ezaka lehibe ataon'ny Alemanina amin'ny lafiny havaozina, ny fampiasana solika fôsily ao amin'ny firenena dia mbola lehibe tokoa, indrindra amin'ny fitaterana.
Mba hanandramana hampihena ity olana ity dia nanangana programa fanampiana ho an'ny fividianana fiara mandeha amin'ny herinaratra ny governemanta Alemanina, na dia mbola tsy namokatra aza ny vokatra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Ny angovo azo havaozina dia mamorona asa efa ho 400000 any Alemana